केही अवस्थामा, गर्भावस्था को समयमा Dicynone प्रयोग गर्ने?
आजकल, केही महिला जन्म दिन डराउँछन्। यसलाई त्यहाँ विशेष केही छ कि जस्तो थियो। जीवन दिन - आमा प्रकृति आफु को उचित सेक्स यस्तो उपहार पुरस्कृत गरियो। अब तथापि, आधुनिक महिला - यो एक गृहिणी, बरु एक व्यापार महिलालाई आफ्नो टाउको आफ्नो काममा जोडतोडले छ जो छ। पहिलो स्थानमा क्यारियर, र त्यसपछि गर्भावस्था सहित अरू सबै कुरा मा। साथै, यस थपियो प्रतिकूल वातावरण र रोगहरु को एक किसिम। सीआईएस देशहरुमा मा डेमोग्राफिक अवस्था हरेक वर्ष बढ्दै छ। तर, हरेक महिला उनको बच्चा बारेमा सपना। यस लेखमा म गर्भावस्था को विषय मा स्पर्श गर्न चाहन्छ। विशेष, गर्भवती भएका महिला मा निरन्तर आक्रान्त विचार गर्नुहोस्।
दुर्भाग्यवश, यो सिर्फ एक विकृति, तर उचित सेक्स को केही बस उपेक्षा गरिन्छ कि एक गम्भीर समस्या छ। कहिलेकाहीं expectant आमा पनि तिनीहरूले मासिक हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। वास्तवमा, गर्भावस्था को सामान्य पाठ्यक्रम कुनै रक्तस्राव हुनु हुँदैन। गर्भावस्था को प्रारम्भिक चरणमा मा expectant आमा अझै बच्चा बारेमा थाह छ जब त्यहाँ अपवाद हुन्छन्, र त्यो रगत छुट्टी को "smearing" मनाया। त्यहाँ गर्भाशय गर्न ovum को संलग्न को फलस्वरूप यो सबै व्यापार छ। सामान्यतया, प्रवाह समय महिनावारी संग coincides। रक्तस्राव यस प्रकारको सामान्य छ। अन्य सबै विज्ञप्ति - विकृति।
यस रक्तस्राव पहिलो trimester मा सुरु भने, यो एक गर्भपात, अस्थानिक गर्भावस्था संकेत हुन सक्छ। कारण को पछि चरणमा यो अक्सर एक placental abruption छ। यसरी, गर्भावस्था को समयमा आक्रान्त - एक बच्चा को हानि गर्न सक्छ कि एक गम्भीर समस्या छ।
को अल्ट्रासाउंड भ्रूण कारगर छ भन्ने देखाए भने, डाक्टर बच्चा सुरक्षित गर्न हरेक प्रयास गर्न बाध्य छ। पहिलो चरण को नियुक्ति छ hemostatic एजेन्ट। गर्भावस्था को समयमा Dicynone यसलाई व्यापक प्रयोग भएको छ। आधारभूत कार्य गर्न साथै, दबाइ capillaries बलियो बनाउन, मद्दत गर्छ platelets को उत्पादन बढावा दिन र रगत clotting बढाउँछ। दन्त चिकित्सा, urology, सर्जरी, नेत्र विज्ञान: साथै, दबाइ व्यापक चिकित्सा को धेरै क्षेत्रहरु मा प्रयोग गरिन्छ। अक्सर गर्भावस्था को समयमा Dicynone धम्की गर्भपात को अवस्थामा नियुक्त गरिएको छ। योनी रक्तस्राव, यो दबाइ अपरिहार्य छ। धेरै स्रोतहरु मात्र स्कारलेट krovovydeleniyah जब चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ भन्छन्। वास्तवमा, डाक्टर संख्या देख छ, र स्थिति अनुसार, सबै "फाइदा" र वजन प्रेरित "बुरा।" दबाइ को लाभ सम्भावित जोखिम पल्ला झुकन भने Dicynone दबाइ निर्धारित। प्रायजसो, expectant आमा तुरुन्तै तथाकथित "botched काम" मा दबाइ प्रबन्ध। तीव्र आवश्यकता मा Dicynone पहिलो trimester देखि सुरु, गर्भावस्था को समयमा निर्धारित। हामी अपेक्षित लाभ कुरा भने, भ्रूण मा दबाइ को प्रभाव सन्दर्भमा नैदानिक अध्ययन सञ्चालन गरिएको छैन। त्यो किन छैन आत्म-medicate गर्नुपर्छ छ। को slightest रक्तस्राव मा तुरुन्त आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। त्यस अवस्थामा, एक महिला छ भने placental abruption, सम्भवतः डाक्टर दबाइहरु र ओछ्यानमा आराम को एक नम्बर सल्लाह दिन्छन् हुनेछ। यस्तो अवस्थामा, एक बच्चा जीवन सुरक्षित गर्न डाक्टर सबै आदेशहरू कडाई पालन गर्न आवश्यक छ।
अक्सर सल्लाह दिन्छन् चक्की Dicynone, रोगी लागि सबै आवश्यक जानकारी समावेश जो निर्देशन। प्रभाव इन्जेशन पछि 1-3 घण्टा भित्र हुन्छ। तपाईं स्पष्ट आफ्नो बच्चा को जीवन बचाउन मदत गर्न सक्छ केही अवस्थामा गर्भावस्था को समयमा त्यो Dicynone बुझ्न पर्छ। कुनै कारण डाक्टर दबाइ सल्लाह दिन्छन् छैन। तथापि, आत्म-Dicynone घातक परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
पहिलो दिनमा गर्भावस्था को लक्षण
गर्भावस्था को समयमा Immunoglobulin। किन उहाँले हुनेछ?
दाता अन्डा र गर्भावस्था
हामी गर्भवती अंगूर गर्न सक्नुहुन्छ? विशेषज्ञहरु को राय
गुदा सेक्स के हो? कसरी गुदा सेक्स मा संलग्न सुरु गर्न?
कस्मेटिक्स लागि सूटकेस - एक व्यावहारिक र मूल भण्डारण स्थान
Prodktsiya कम्पनी Travelite: सूटकेस। समीक्षा, लोकप्रिय मोडेल र आफ्नो विशेषताहरु
"आईएल बृहस्पति 2" - र उपकरण विशेषताहरु
कबूतर विषाणु किन र यो खतरनाक छ?
Kefir मा रसीला दाउरा: चरण नुस्खा फोटो द्वारा एक कदम
"सगरमाथा" (चलचित्र): आलोचकहरु र दर्शकहरुको देखि समीक्षा
आकर्षण Karaganda: नाम तस्बिरहरू
मानिसहरू मा मधुमेह को संकेत के हो?
Zupa - अपमान वा प्रशंसा?